MB ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB ဇူလိုင်လ 2016
သူ၏အစောပိုင်းရုပ်ရှင်များတွင်ဂျွန်ဝိန်းကအခြားကောင်းဘွိုင်တစ် ဦး အား“ ငါအမှတ်တံဆိပ်သံနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာမကြိုက်ဘူး၊ မင်းမှားနေတဲ့နေရာမှာနာကျင်တာပဲ!” ဟုပြောခဲ့သည်။ သူမှတ်မိတာကရယ်စရာကောင်းပေမယ့်ချာ့ချ်တွေကကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြှင့်တင်တာလိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းတွေကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် the ၀ ံဂေလိတရားကိုဘယ်လိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားမိစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုကိုရှာ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို“ စစ်မှန်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတည်း” ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကိုမြှင့်တင်ရန် the ၀ ံဂေလိတရားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်ဤအလေ့အကျင့်သည်သမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားကိုထိခိုက်စေခဲ့သည်။
သူ၏ospelဝံဂေလိတရားကိုဖြန့်ဝေသောယေရှု၏လုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်
ခရစ်ယာန်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုမှုသည် အမှတ်တံဆိပ်ပါသောထုတ်ကုန်ကို စျေးကွက်တင်ရန်မဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အကူအညီဖြင့် ယေရှု၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ရန်နှင့် အသင်းတော်မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သူ၏ဧဝံဂေလိတရားကို ဖြန့်ကြက်ရန်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ဧဝံဂေလိတရားသည် အကြောင်းအရာများစွာကို ဖော်ပြထားသည်- ယေရှု၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်အားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းတို့ကို ပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်ကဲ့သို့ သက်တမ်းတိုးစေသနည်း (နှင့် အသက်တာသစ်တွင် အသက်ရှင်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း)။ ကမ္ဘာချီမစ်ရှင်တွင်ပါဝင်သည့် ယေရှု၏နောက်လိုက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုခြင်း၏သဘောသဘာဝ၊ သခင်ယေရှုခမည်းတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထာဝစဉ်ပါဝင်မည်ဟု သေချာသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ယေရှုခေါ်ခဲ့သည့် ဧဝံဂေလိဓမ္မအမှုဆောင်ခြင်းတွင် စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (တံဆိပ်တပ်ခြင်းအပါအဝင်) သည် အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း အသုံးပြုမှုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှု၏သတင်းစကားကို ဖြန့်ဝေရန်နှင့် လူများကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင် ကူညီပေးရန်အတွက် လိုဂိုများ၊ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ စာစောင်များ၊ သတင်းလွှာများ၊ အိုင်ကွန်များ၊ သတင်းလွှာများနှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ထိုနည်းလမ်းများသည် အသုံးဝင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အရပ်ဘက်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ပေါ့ပါးပြီး ဆားဖြစ်ခြင်းမှ တားဆီးခြင်းမျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်သည် မှန်ကန်သောအသုံးချမားကတ်တင်းကို ဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်သော်လည်း သတိထားရန် မေတ္တာရပ်ခံပြီး ၎င်းကို ရှုမြင်ပုံနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးစေလိုပါသည်။
George Barna ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် လုံလောက်သောတန်ဖိုးရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို လဲလှယ်ရန် နှစ်ဦးသဘောတူသဘောတူထားသော လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးပါဝင်သည့် စုပေါင်းအသုံးအနှုန်းတစ်ခု (ဘုရားကျောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် ဘုရားကျောင်းစျေးကွက်သို့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းချင်း လမ်းညွှန်ပါ)။ Barna သည် ကြော်ငြာခြင်း၊ လူထုဆက်ဆံရေး၊ မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း၊ ဖောက်သည်စစ်တမ်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းများ၊ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ စျေးနှုန်းမူဝါဒ၊ အမြင်အာရုံခံယူခြင်းနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစသည့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုများကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဟူသော ဝေါဟာရကို ချဲ့ထွင်ပါသည်။ ထို့နောက် Barna က "ဤအရာများသည် အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာသောအခါ လုံလောက်သောတန်ဖိုးရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖလှယ်နိုင်စေသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်ဝိုင်းသည် ပိတ်သွားသည်"။ လုံလောက်သောတန်ဖိုးရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် လဲလှယ်မှုတစ်ခု၏ စိတ်ကူးကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထဲတွင် ခဏထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်းအုပ်ဆရာအချို့သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းအကြီးစားချာ့ချ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ရေးသားသောလူကြိုက်များသောစာအုပ်ကိုလေ့လာပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ စာအုပ်၏အဓိကသတင်းစကားမှာသင်၏ချာ့ချ်ကိုနည်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်ရောင်းလျှင်သင်နှင့်လူများနှင့်သူတို့၏အသင်းတော်များကိုသူတို့စိတ်အားထက်သန်စွာလက်ခံနိုင်သောအရာတစ်ခုကိုသင်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်းအုပ်ဆရာအချို့သည်အကြံပြုထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုပြီးအသင်း ၀ င်အရေအတွက်တိုးတက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရား (နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များ) ကို Walmart နှင့် Sears တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏာန်းတိုးတက်မှုအတွက် အသင်းတော်အချို့အသုံးပြုသည့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများကိုပင် အသုံးပြုသင့်ပါသလား။ တန်ဖိုးကြီးသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိတရားကို မြှင့်တင်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဧဝံဂေလိတရား ဟောပြောရန်နှင့် အလွှာပေါင်းစုံမှ လူတို့ကို တပည့်ဖြစ်စေရန် တာဝန်ပေးသောအခါ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ထဲတွင် စွဲမှတ်ထားသည်မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။
တမန်တော်ပေါလုရေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဧဝံဂေလိတရားကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသော လောကသားများက မကြာခဏ ဖောက်ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် နှမြောစရာအဖြစ် တင်ပြခြင်းဖြစ်သည် (1. ကောရိန္သု 1,18-23) ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အလွန်အမင်း လိုက်စားသော စားသုံးသူပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် မုချမယူဆပါ။ ယေရှု၏နောက်လိုက်များအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိပကတိစိတ်မဟုတ်၊ 8,4စာ-၅)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းတွင် ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသည်မှာ သေချာသော်လည်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ (အကျိုးဆက်အားဖြင့် သူ၏အမှုတော်နှင့်) ကိုက်ညီနေပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် နားလည်သည်၊ ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားပြန့်ပွားခြင်းအတွက် အချို့သော "လူသား" (လောက) နည်းစနစ်များကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်မှာ အံ့ဩစရာမဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ကျေးဇူးတော်၌ ဤတာဝန်ကို အပ်နှင်းထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်မပျက်ပါ။ မရိုးသားသော တရားဟောနည်းများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ငြင်းပယ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထက်မြက်ရန်မကြိုးစားဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အတုအယောင်မလုပ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အမှန်တရားကို ပြောဆိုနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ရိုးသားသော နှလုံးသားရှိသူတိုင်း သိသည် (2. ကောရိန္သု 4,1-2; ဘဝသစ်)။ ပေါလုသည် ရေတိုအောင်မြင်မှုဆီသို့ ဦးတည်သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း ဧဝံဂေလိတရား၏အကျိုးကို ခံရသည်။ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမှုတွင် သူအလိုရှိသော တစ်ခုတည်းသော အောင်မြင်မှုမျိုးသည် ခရစ်တော်နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုပါသည်။
success ၀ ံဂေလိတရားကိုမြှင့်တင်ပေးသောချာ့ချ်များမှအောင်မြင်မှုရရန်စာရွက်ကဲ့သို့သောကတိက ၀ တ်များမှာ“ ငါတို့ဘုရားကျောင်းကိုလာပြီးမင်းရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ကြွယ်ဝမှုကိုသင်ရရှိမည်။ သင်ကြွယ်ဝစွာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်။ ကတိထားတော်မူသောကောင်းချီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အာဏာ၊ အောင်မြင်မှုနှင့်ပြည့်စုံလိုသောဆန္ဒတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသူများအားလိုအပ်သောအခြေအနေများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသောအခါသကြားနှင့်ကပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ယုံကြည်ခြင်းမြင့်မားခြင်း၊ အုပ်စုငယ်တစ်ခုတက်ခြင်း၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလုပ်ငန်း၌တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ခြင်းစသောအရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့မဟုတ်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အချိန်ကာလများကိုစောင့်ထိန်းခြင်း။ ၎င်းသည်ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းတွင်တိုးတက်ရန်အထောက်အကူပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထံမှသူမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများနှင့်လဲလှယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒများကိုကြင်နာစွာဖြင့်ဘုရားသခင်အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှမလှုပ်ရှားစေနိုင်ပါ။
သူတို့၏ဆန္ဒများပေးရန် ဘုရားသခင်ထံ လာနိုင်ကြောင်း လူတို့အား ဆွဲဆောင်ခြင်းသည် မရိုးသားသော ကြော်ငြာခြင်းနှင့် လိမ်လည်သော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်အသွင်သဏ္ဍာန်ဖြင့် အယူမှားခြင်းထက် မပိုပါ။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော စားသုံးမှုဆန္ဒများကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အသေမခံခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့် ချမ်းသာမှုကို အာမခံရန် သူသည် လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ကြင်နာသောဆက်ဆံရေးသို့ ကြိုဆိုရန်နှင့် ထိုဆက်ဆံရေး၏အသီးအပွင့်ဖြစ်သည့် ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ရွှင်လန်းမှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်တို့ကို ပေးဆောင်ရန် ကြွလာခဲ့သည်။ ဒါက ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်လှစွာသော၊ အခြားလူတွေကို ချစ်ပြီး ကူညီဖို့ မေတ္တာကို ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ ဤချစ်ခြင်းအမျိုးအစားကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟု အချို့ (အများအပြားက) ထင်မြင်နိုင်သော်လည်း ဤကယ်တင်ခြင်း၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းမေတ္တာ၏အရင်းအမြစ်ကို အမြဲညွှန်ပြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီသောနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကြားတန်ဖိုးလုံလောက်သောဖလှယ်မှုအဖြစ်ရောင်းဝယ်သင့်သလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ grace ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူတိုင်းအတွက်ဆုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှမှာလက်ချည်းသာလက်ဆောင်ဖြင့်လက်ဆောင်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုဘုရားသခင်ပိုင်သည်ဟုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်နှင့်ချစ်ခြင်း၏မိတ်သဟာယကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စိတ်ဖြင့်ကြည်ညိုလေးမြတ်သောအသက်တာဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုဖွင့ ်၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ရန်လွတ်လပ်မှုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မာနကြီး။ ပုန်ကန်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကအံ့သြဖွယ်လဲလှယ်
ဤအတွေးများကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်တော်၌၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌အထူးကောင်းမွန်သောအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုထောက်ပြလိုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပေါလုရေးခဲ့သောစာကိုဖတ်ပါ။
ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့သည်။ ငါအသက်ရှင်သော်လည်း ယခု ငါမဟုတ်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ၏။ ယခု ငါသည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်ရှင်သည် (ဂလာတိ၊ 2,19ခ-၂၀)။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသောအသက်ကိုသခင်ယေရှုအားပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သောအခါသူ၏အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌တွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ထားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အတိုင်းမနေထိုင်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ရွေးနုတ်ရှင်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုတိုးပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာတွေ့သည်။ ဤလဲလှယ်ခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ဘုရားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝမိတ်သဟာယကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောသဘောသဘာဝကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုံးလျားလျားခွင့်လွှတ်သည်။ ဤသည်ဆက်ဆက်လုံလောက်သောတန်ဖိုးကုန်ပစ္စည်းများလဲလှယ်မဟုတ်ပါဘူး!
ခရစ်တော်၌ယုံကြည်သူတိုင်းယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေအသစ်သောသတ္တ ၀ ါဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကလေးဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသက်တာသစ်ကိုပေးသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်လူကိုချစ်သည့်ခရစ်တော်၏စုံလင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အသစ်သောသတ္တဝါတစ်ပါးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်သည်ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်၊ သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးသောဝမ်းမြောက်ခြင်း၌ရော၊ သူ၏အသက်တာ၌ပါ ၀ င်သည်။ သူ၏ဆင်းရဲခြင်း၊ သူသေခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ဘုရားသခင့်သားသမီးများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအမွေခံများဖြစ်ကြပြီးခမည်းတော်နှင့်ကိုယ်တော်၏စုံလင်သောဆက်ဆံရေးကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤအမှု၌ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်မြတ်နိုးရသောသားသမီးများဖြစ်လာရန်နှင့်သူနှင့်အတူတကွစည်းလုံးညီညွတ်စွာအတူတကွစည်းလုံးညီညွတ်စွာအတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခရစ်တော်ပြုခဲ့သမျှအားလုံးမှကောင်းချီးပေးသည်။
အံ့ exchange ဖွယ်ကောင်းသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊